हाइकू कसरी लेख्ने ? | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 03/21/2011 - 13:10
यति महत्त्वपूर्ण कविता कसरी लेख्ने ? हाइकू हेर्दा तुरुन्त लेख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । हाइकूलाई नबुझी खरखरती लेख्नेहरू पनि छन् तर यसतो हाइकू हाइकू नभई बतासे फूल जस्तै हुन्छन् । हाइकूजस्ता रूप तर खास हाइकू नहुँदा वारीमा चरालाई छकाउने नक्कली मान्छे 'बुख्याँचा' बनाए जस्तो हुने हुँदा ती काइते कामलाई 'काइकू' भन्ने गरेको छु । फोस्रा धान जस्ता यस्ता छोटा कवितामा ज्यान हुँदैन र ती सक्कली हाइकू हुनसक्दैनन् । सक्कली हाइकू लेख्नका लागि हाइकूको इतिहास, संरचना शास्त्र र नमूना हाइकू पढेर त्यसभित्रको सार बुझ्न पर्छ । यसरी बुझेर लेखिएको हाइकूमा रस रङ दर्शन प्रदर्शन हुन्छ । जिउँदोपनाको धुकधुकी पाइन्छ र त्यसलाई मन्त्रजस्तै जप्न, सम्झन र प्रयोग गर्न मात्र हैन त्यसबाट आत्मीय सुख र मीठो स्वाद लिएर शान्तिको स्वास फेर्न सघाउ पुग्छ ।
हाइकू रचना जम्मा ३ हरफमा हुन्छ । पहिलो हरफ ५ अक्षरयुक्त पदावली, दोस्रो ७ अक्षरयुक्त र तेस्रो ५ अक्षरको पदावली चकित पार्ने प्रकारले रचना हुन्छ । हाइकू पहिलो हरफ ५ अक्षरको अर्थपूर्ण संरचना, दोस्रोमा ७ अक्षरमा र तेस्रो पनि ५ अक्षरमा नै रचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हाइकू भन्ने वित्तिकै ५-७-५ अक्षरको जम्मा १७ अक्षर भित्र ३ हरफमा लेखिने कविता भन्ने बुझिन्छ । यो छोटो शैलीको कतिवा हो । मात्रा मिलाएर मात्र हाइकू बन्दैन । हाइकू भित्र रुखको भाषा 'किगो' हुनुपर्छ भन्ने जापानी मान्यता छ । जापानी भाषामा 'क' भनेको रुख र 'गो' भनेको भाषा हो । किगोको अर्थ प्रकृतिको विम्ब दिनुपर्छ भन्ने हो । अर्थात् प्रकृतिको भाषा नबुझी सुन्दर हाइकू सिर्जना हुनसक्दैन । प्रकृतिबाट नै जीवन दर्शन दिन हाइकू अत्यन्त गहिरो सोचाइमा सिर्जना हुन्छ । एउटा राम्रो हाइकूले चिन्तन मनन गर्न मात्र हैन एउटा उज्यालो दिएर आत्मीय सुखशान्तिको भिन्नै दुनियाँ पुर्‍याउँछ । यसैले जापानमा बौद्ध भिक्षुले हाइकूलाई ध्यानको एउटा माध्यम रचना बनाएको पाइन्छ ।
साहित्यमा सानो मन्त्रजस्तो प्रभावपूर्ण कविता हाइकू जापानी सौन्दर्य र शान्ति आकाङ्क्षाको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो । वाम पुड्के वृक्ष बनाउनेदेखि एउटा प्लेटमा पूरा बगैँचा हत्केलामा अटाउने गरी बनाइने 'बोन साइ' र सूक्ष्म भू-दृश्य देखाउने 'बोनकेई' तथा पत्थर बाग 'बोन सेकी' जस्ता सूक्ष्म सिजर्नाले छुट्टै आनन्द प्राप्त हुन्छ । साहित्यमा पनि हाइकू छोटो कवितामा उत्कृष्ट मानिन्छ । हाइकू साथ चित्र भए त्यसलाई 'हाइगा' भन्ने गरिन्छ । हाइकू राम्ररी विचार गरी रचना हुने सके प्रभावपूर्ण बन्छ ।
ठिस बुढा — Sat, 03/26/2011 - 16:58
ठिस बुढा — Sat, 03/26/2011 - 16:59
prakashpoudel — Thu, 03/31/2011 - 17:41
जाली माया लाउनु रैछ
सुरुमा शङ्केत त्यस्तो
धनी बाउको शाख